Sharciyada hawada sarre iyo khilaafka u dhexeeya Somaliland iyo Somaliya Q.4aad (WQ: Axmed Muuse) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Sharciyada hawada sarre iyo khilaafka u dhexeeya Somaliland iyo Somaliya Q.4aad (WQ: Axmed Muuse)
1. in shaqaalaha tababarka ku qaadanaya marka ay tababarka dhammaystaan ay noqdaan shaqaalaha ka shaqeynaya xarunta CACAS, si looga maarmo shaqaalaha kale ee aan Soomalida ay hay’addu qoranayso, maadaama ay project-ku yahay mid Soomaalidu leedahay.
2. In Lacagta ay qaadanayaan loo kordhiyo, xaaladoodana looga war hayo, loona dhakhmin shaqaale tababar uun qaadanaya.
1. In laga bilaabo 15ka May 2013 saacaddu marka tahay 06:00hrs (03:00 GMT) dhammaan duulimaadyada UNHAS la xayiray, diyaaradaha hadda fadhiya airports-ka Somaliland la joojiyey ilaa uu war danbe soo baxayo [Tixraac Notam-ka hadda] ee khuseeya arrinta.
2. Laga bilaabo 5-ta July 2013 dhammaan lahaanshaha hawada sare iyo maamulkeeduba wuxuu hoos iman doonaa maamulka MoCAAT, waxaana dhammaan diyaaradaha isticmaala hawada Somaliland, marka lagu daro kuwa hawlaha bani’aadanimo loo sheegi doonaa inay soo ka soo dalbadaan ogolaanshaha hawa marista iyo ku degitaankaba (Over-Fly permission and Landing rights) Wasaaradda MoCAAT oo keliya.
3. In laga bilaabo 1da June 2013 ay MoCAAT faraysaa CACAS Project Coordinator-ka in aanu ku maamuli karin Mogadishu FIR hawada Somaliland (Somaliland Airspace Management and Control).
4. In laga bilaabo manta oo ah 14-ka May 2013 ay UNDP/ICAO iyo CACAS-ba ay noo xidho wixii aanu xaq u lahayn ee project-ka ka mid ahaa ilaa inta aanu helayno ama naloogu soo gudbinayo qaybtayada aanu ku Air Navigation Charges dariiqa IATA.
1. In la sameeyo laba FIR (Flight Information Regions) oo kala ah Mogadishu FIR iyo Hargeisa FIR kala madax bannaan oo Soomaaliya iyo Somaliland ka maamushaan.
2. In La sameeyo Somali Joint Aviation Control and Management Centre oo ay wada maamulaan Soomaliya iyo Somaliland iyadoo ay harunteeduna noqon doonto Hargeisa, maamulkuna uu ka boonaan doono 4 xubnood oo si isleeg loo qaybsado maamulka iyo dhaqaalaha ka soo baxa Air Navigation Revunue-ga.
3. In inta si uun lagu heshiinayo ay hawsha sii wadaan hay’adda ICAO ama CACAS.